China Akwa Highbay Fixture Mgbapụta China Manufacturers & Suppliers & Factory
Akwa Highbay Fixture Mgbapụta - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Akwa Highbay Fixture Mgbapụta)
Led Canopy Lighting Fixture 75W 5000K
Anyị Philips Led Canopy Lighting bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a na-enye ọkụ ọkụ dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. The Dugara kanopi Light eletrik nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Anyị na- eduhie ìhè 70w bụ slim design slim na-achọ, dị mfe iji...
500W LED Tennis Tennis Light Fixtures 5000K 65000LM
500W LED Tennis Tennis Light Fixtures 5000K 65000LM ✔ 130 ENGLỤ NCHE - Nke a dị elu na-emepụta ọkụ basketball 500W nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Ebube elu mmiri dị elu 5000K na-egbuke egbuke dị mma maka ịmalite nnukwu ụlọ egwuregwu, ebe ndị egwuregwu na egwuregwu dị ka ụlọ nchịkọta basketball, ụlọ tennis na ebe bọl,...
150W Led Warehouse Lighting Fixtures 5000K
Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ 150W Na-agbanye Ndozi bụ 130lm / w na 19500 lumens. Ụlọ anyị na- enwu gbaa 150w nwere ike dochie 400W HPS MH HID. Ebube echichi maka Nke a na-emepụta ụlọ ahịa bụ 5-7m. Ụlọ nkwakọba ihe a mere ka ọkụ gbaa bụ EC ROHS ETL DLC. Ụlọ ọrụ ịkwakọba ihe na-ebute bulbs eji mee ihe maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ...
IP65 Industrial High Bay Lighting Fixtures 150W
Ihe 150W Industrial High Bay Lighting Fixtures bụ 130lm / w na 19500 lumens. Ngwa Amazon 150 nke High Bay Lighting nwere ike dochie 400W HPS MH HID. Ejiri dị elu nke 150w High Bay Lighting Canada bụ 5-7m. Ngwa ngwa ọkụ anyị nwere ike iji maka ime ụlọ na n'èzí. Nke a na-enwu ọkụ ọkụ ejiri maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ...
200 Watt Ufo High Bay Lighting Fixtures
Ihe 200 Watt Ufo High Bay bụ 26,000 lumens na 130lm / w. Nke a 200w Ufo High Bay Light bụ DOB na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala. The High Bay Lighting Fixtures 200w bụ ájá na-eguzogide ma na-eguzogide ọgwụ iji dozie ma ọ bụ ihe mkpofu dị nro. Anyị na-akwado ETL DLC anyị nwere ike ịgba ọkụ ọkụ . A na -eji ọkụ ọkụ a na-ahụ...
40W Led Corn Bulb Fixtures 4000k 5000lm
Anyị Led Corn Bulb 4000k bụ oke na-egbuke egbuke na 120lm / w akwa watt to lumen output ratio. Ugbo ọka a 40w nke ọka Bulb na- anọchi bọtịnụ 120W na-eme ka ọ bụrụ na ị na-echekwa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. The Bulb Corn 5000lm enweghị radieshon, ọ dịghị flickr, Ngwa na na na, ọkụ ọkụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na...
300W Led Parking Lot Light Retrofit Fixtures 5000k
Anyị 300w Na-echekwa ụgbọala Lot Light Fixtures 130lm / w na 39000lm na 300w Led Mpempe ụgbọala Lot Light Rerofit nwere ike dochie HPS / HID 10 00 watt . Egwurugwu Mgbaba Lions Na-echekwa Leta 300w bụ Ụdị mmiri 3M na IP65. Anyị bụ ndị na- emepụta ihe ọkụkụ na-adọba ụgbọala ma otu puku watt nke 1000 na-eduzi ìhè...
1. 24000lm DOB Led highbay ìhè ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. DOB 24000lm Mmiri dị elu dị na IP65 bụ mmiri mmiri na-eji eme ihe n'èzí, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. DOB Led highbay 24000lm ìhè bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na...
18000lm DOB Led highbay light
18000lm DOB Led highbay light 1. DOB 18000lm Enwere ìhè dị elu ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. DOB 18000lm Ebube dị elu bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu,...
13000lm DOB Led highbay ìhè
13000lm DOB Led highbay ìhè 1. DOB 13000lm Ebube ọkụ dị elu ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. DOB Led highbay 13000lm ìhè bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu,...
1. 200w DOB Led UFO highbay Industrial ìhè ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. DOB 200w Led Ìhè bụ IP65 waterproof maka n'èzí eji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Na- adabere na Low Bay ìhè Ahịa bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu,...
Akwa Highbay Fixture Mgbapụta Ebube Highbay Fixtures High Bay Fixture High Bay Fixture Hangers 240W High Bay Fixture Led Linear High Bay Fixtures 347V Led High Bay Fixtures Egwuregwu Lightball Fixtures